Uchwepheshe we-Semalt: Okufanele Ukwazi Nge-Web-Crawling
Izinjini zokusesha zikhahlela okuqukethwe ukuzibeka kuyi-intanethi. Izinto zokwenziwa kwewebhu ze-SEOkulula ukuthola. Ukusungulwa kwebalazwe lesayithi le-XML lithola amakhasi ewebhusayithi indexed, kepha kudinga uhlelo olwengeziwe lwe-SEO olusebenzisa isayithiukukhwabanisa ukuhlinzekela ukutholakala kolwazi oluhlosiwe.
Uchwepheshe we i-Semalt Izinkonzo Zedivolumu, uFrank Abagnale uchaza izici, okumele wazi mayelana ne-website yokweqa.
Qonda okuqukethwe kwesayithi
Ukukhwabanisa yi-Google kuqinisekisa ukuqapha okucishe kwemikhiqizo nolwazigqoka iwebhusayithi - table id redshift pricing. Izigaba zemikhiqizo kufanele zihanjiswe ngokwemiklamo eyenziwe ngenkathi ifomethi yamakhasi kufanele ibeokungahambisani ngaphandle kokuxhaphaza, indalo entsha noma isingeniso samakhasi angahlelelwe.
Amaphutha ajwayelekile aholela ekulahlekelweni kwezinye izingxenye zolwazi ngendlela ethileukusesha kungenzeka kwenzeke ngenxa yokungakwazi komuntu wokukhahlela ukugcwalisa ukufinyelela. Ezinye izindaba ze-SEO zingabangela ukuphazamiseka kwesakhiwo noma ukuguqulwaIsihloko se-URL nokuhlunga kwesayizi okulahlekile kwekhasi eliseshiwe. Isheke kumarobhothi.txt noma i-Noindex global ingasiza ekuxazululeni ukuvimba ukukhwabanisa.
Ukuqonda ama-URL avunyelwe ngokuvamile
Naphezu kwe-SEO elungile, amanye ama-URL anganqatshwa ngenxa ye-robots.txt. Ukufunda ukuthi yiniamasayithi angayithola akwenza kube lula ukuhlukanisa amabhulogi angalungile futhi ngamabomu..
Yazi amaphutha angu-404
Ukubuyisela iphutha le-404 kungenzeka ngenxa yokungabi nolwazi olwanele loseshoizinjini okuzoyithatha noma isayithi ayinakunyulwa ngenxa yokuthi ishiyiwe. Iklayenti enenhloso yokukhulisa ukusebenza kwabo kwe-intanethi ngokusebenzisa i-I-SEO kufanele igcine futhi iqonde isizathu esivela kumlayezo wephutha uma kufanele sithole isinqumo.
Ukuqonda umgijimi nokuthi kubonakala kanjani ukuqondisa kubalulekile ukunciphisainombolo yokuqondisa ngaphambi kwenjini yokusesha ithola ikhasi langempela elidingekayo. Ukuguqulwa kwama-302 okuqondisa kabusha ku-301 kwenza ukuphuma kufike ku-15amaphesenti okudluliselwa ekhasini lokuphela.
Thola imininingwane ye-meta ebuthakathaka
Abakwa-Crawlers bangamathuluzi omuhle kakhulu wokuthola ulwazi olwethulwe kahleiwebhusayithi. Bahlaziya uma amakhasi ephindaphindiwe noma aqukethe idatha engalungile ye-meta ephikisana nesimo samakhasi ngisho ne-SEO ngenxaisenzo ngamarobhothi u-Noindex.
Ukuhlaziywa kwamathegi e-canonical
Ukwethulwa kwakamuva kwamathegi we-canonical kungaba yisifundo sokuphinda okuqukethwe ngokuphindaphindiwe,uma kusetshenziswe ngokungalungile. Ukuhlaziywa kokuqukethwe okubhekayo ngokumaka ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwabakwa-crawlers kuqinisekisa ukususwa kokuqukethwe okuphindiwe.
Thola idatha yenkambiso
Ukusebenzisa i-RegEx noma i-XPath ngokungeziwe kubakhanki banganikeza ukuhlonzaizinkulumo kanye nezingxenye ze-XML zedokhumenti ngenjini yokusesha. Le ngxenye yesimo se-SEO isitshela umgibeli ukuba athathe okuyisisekeloizakhi zamakhasi anjengamanani, isakhiwo sedatha, namahluzo okuqukethwe.
Abakwa-crawlers abaningi basebenzisa i-Google Search Console namathuluzi we-Google Analyticukuhlinzeka ngolwazi kuwo wonke amakhasi anezinkuni. Lokhu kuthuthukisa ukuhlelwa kwamakhasi aseshayo nokuhlinzekwa kwedatha edingekayo ukubekaUlwazi oludingekayo kumephu wokucinga.
Umphumela omuhle kakhulu ovela ku-crawlers nasezintweni ze-SEO kuxhomeke kuhlobo lwewebhusayithi,futhi okuqukethwe okuhanjisiwe. Ukukhomba amathuluzi afanelekayo okuhambayo kuyisinyathelo sokuqala sokufinyelela khona ku-inthanethi okuqinisekisiweimpumelelo. Ukuthola isizathu esithile sokwaziswa okuvuliwe ngokuhlaziywa kuqinisekisa indlela ekhona yokulungisa inkinga.